Albamiin Haacaaluu Hundeessaa walleewwan 14 qabu torban dhufu akka gadhiifamu maatiin himan | Kichuu
Posted on June 26, 2021 by kichuu_admin
‘Ummanni kuni miira inni keessa jiru waaniin beekuf sagalee isaa yoo dhagahu ni boqota jedheen yaada”
Albamiin sadaffaa Artist Haacaaluu Hundeessaa yeroo lubbuun ture qopheesse torban dhufu eegalee ummataaf akka gadhiifamu maatiin har’a ibsa miidiyaaleef kennaniin beeksisan.
(bbc)—Albamiin isaa sadaffaa mata-duree ‘’Maal Mallisaa’’ jedhu Wiixata Waxabajji 28, 2021 ummataaf gad lakkifama jedhameera. Eebbi albamii Artist Haacaaluu kun guyyaa waggaa tokkoffaa inni itti ajjeefamerra oola.
‘’Hojiiwwan inni osoo lubbuun jiru osoo hojjetuu irraa wareegame kana ummata biraan gahuuf walitti qindeessinee xumurree jirra,’’ jechuun haati warraa isaa Aadde Faantuu Damissee Diroo dubbattetti.
“Haceen ani ummata kootiif qaaliidha jedheera. Ummannimmoo isaaf maalidha kan jedhu CD orijinaala isaa bitatee akka seenaadhaaf keewwatu ergaa koo dabarfachuun barbaada,’’ jechuun himte.
Akka maatiin har’a beeksisanitti torban dhufu gaafa Wiixataa albamiin inni osoo hojjetuu irraa ajjeefame ifatti bakka keessummoonni argamanitti eebbifama.
Sagantaa maatiin qopheessan jedhame kanarratti sababa Covid-19n kanneen hirmaatuu danda’an namoota 450 qofa akka ta’aniifi ummanni akka kana hubatu dhaamaniiru.
Sagantaa har’aa irratti kan argame weellisaan gameessi Elemoo Alii ummati CD orijinaala bituun maatii isaa bira akka dhaabbatu waamicha dhiheesseera.
Artist Haacaaluu Hundeessaa waggaa darbe Waxabajjii bultii 29, 2020 [ALI Waxabajjii 22, 2012] magaalaa Finfinneetti ajjeefame.
Hanga yoonaa sababni ajjeesaa isaa hin baramne.
Kanneen ajjeechaa isaatiin shakkamanii to’ataman afur irratti himannaan kan baname yoo ta’u, murtii dhumaa hanga yoonaa hin kennamne
Bilboordiiwwan beeksisa albama Haacaaluu magaalaa Finfinnee keessatti midhaaffaman keessaa tokko
‘Haacaaluun waan hunda nuuf salphise’ Kana dura Haacaaluun bara jireenya isaa albama lama, ‘’Sanyii Mootii’’ jedhuufi ‘’Waa’ee Keenya’’ jedhu hojjeteera. Kan sadaffaafi osoo hojjechaa jiruu irraa ajjeefame ammoo walleewwan 14 akka qabu maatiin ibsaniiru. Hiriyyaan isaa dhihoo Ingiduu Cimsaa miidiyaaletti akka dubbatetti, Haacaaluun kana dura albamii lamaan ala wallee qeenxee torba hojjeteera. “Haacaaluun saba isaatiif wareegame.
Koppii baay’ee maxxansinee waan jirruuf ummanni kabaja Haacaaluudhaaf jedhee yaadannoodhaaf akka mana kaa’u,’’ jechuun gaafate. Karchallee Amboo hanga Galma Barkumee – Walleefi qabsoon Haacaaluu Hundeessaa yeroo yaadatamu Albamii sadaffaa Artist Haacaaluu kana kan maxxansiseefi raabsu dhaabbata maatii Haacaaluu kan ta’e Wabii Piromoshin ta’uun ibsameera. ‘’Wabii Piromoshin eenyu yoo jettan, Wabiin mucaa Haacaaluuti. Piromooshin maqaa mucaa isaatiin hundeeffamee jirudha,’’ jechuun obboleessa quxisuu Haacaaluu kan ta’e Sisaay Hundeessaa
dubbateera. Akka maatiin ibsanitti, ammatti walleen isaa gama CDn ala gama onlaayiniidhaan lammiilee biyya keessaafi ala jiraniif gama Itunes, Spotify, Amazon dabalatee ni argama. Ammatti ‘’CD 300,000 – 500,000 qopheessinee jirra,’’ jechuun Sisaay dubbateera. Fuulli Fesbuukii maqaa Haacaaluu qabuufi hordoftoota 50,000 ol qabu maatiin akka baname ibsa har’aa irratti miidiyaaleef himameera. Adeemsa wallee isaa ummataaf qopheessuu keessatti waan isaan mudate BBCn kan gaafateef, ‘’Bu’aa bahiin keessa dabarre hangas mara jabaadha jennee waanti [komii dhiheessinu] hin jiru,’’ jechuun deebisan. ‘’Inni waan hunda nuuf salphisee wareegame,’’ jechuun ‘’bu’aa bahii kan nurraa salphise isuma [Haacaaluu],’’ jechuun artistichi ajjeefamun dura dalaguu isaa hime Sisaay . Biyya keessa CD fi dijitaalaan ala ammatti kaassettiidhaan walleen isaa qophaa’ee akka hin jirre maatiin ibsaniiru. Garuu yoo barbaachisaa ta’e qopheessuu akka malan ibsameera.
Qabiyyeen albamii kanaa maali?
Walleewwan kana duraa irratti Haacaaluun qeeqa, aadaa, jaalala, tokkummaafi dhimmoota garaagaraarratti weelliseera.
‘’Qindeessitoonni afur caalaan irratti hirmaataniiru. Miksingiifi maastarii Abagaaz Kibrawaq Shiwotaatu dalage. Tumsa maatiifi hiriyyootaan as geenye,’’ jechuun Sisaay dubbateera.
Wallee 14 kana keessaa sirbi jaalalaa jira, sirbi dhala namaaf hojjete jira, gootummaan ni jira, waa’een gaaffii kaasu ni jira, akkasumas kan tokkummaa kaasu akka jiru Sisaay qabiyyee isaanii dubbate.
‘’Osoo lubbuun jiraatee ofii isaatiif ibsate natti tola,,” jechuun imimmaan ija ishiitti kan dhufe haati warraa isaa albamii haaraa keessa ‘’waa’een maatiillee jira’’ jechuun addatti BBCtti himteetti.
Waggaa dura yeroo Haacaaluun ajjeefametti walleen kanneen dalage keessaa ‘’Galatoomaa’’ jedhu miidiyaa hawaasummaa gubbaa gadhiifamaa ture.
Maatiin wallee ‘’istudiyoo keessaa miti kan bahe’’ jedhan kun albama haaraa Wiixata dhufu eebbifamu keessa akka jiru dubbatameera.
‘Sagaleen isaa ummata boqochiisa’
Guyyaa Jimaataa waa’ee albama haaraa irratti addatti BBC waliin turtii kan taasiste haati warraa isaafi haati ijoollee isaa sadii Aadde Faantuun walleen isaa ummata boqochiisa jetti.
‘’Ummanni kuni miira inni keessa jiru waaniin beekuuf sagalee isaa yoo dhagahu ni boqota jedheen yaada,’’ jechuun dubbatte.
‘’Yaadannoo isaa waggaa tokkoffaa irratti ni eebbifama. Bariituu isaa gaafa 22 [Waxabajjii, 2013] kaasee bakka hundayyuu ni raabsama,’’ jette.
Ajjeechaan Haacaaluu erga dhagahamee bakkeewwan Oromiyaafi Finfinnee garaa garaatti hookkarri kan uumame yoo ta’u, lammiileen 170 ol lubbuu dhabuu poolisiin ibseera.
Lammiilee lubbuu dhaban alatti qabeenyi biiliyoonaan tilmaamamullee barbadaa’eera.
Ajjeechaa isaa booda hookkara uumamen walqabatee namoota siyaasaa dabalatee kumaataman kan lakkaa’aman hidhaa seenuun isaanii ni yaadatama.
Haacaalu Hundeessa Naw Oromo music ilmaa nama 2021